Samachar Batika || News from Nepal » क*ण्डमले नेपाली नर्सलाई यसरी बनायो रातारात भा’ईरल [भिडियो सहित]
क*ण्डमले नेपाली नर्सलाई यसरी बनायो रातारात भा’ईरल [भिडियो सहित]
अहिले सामाजिक सञ्जालको जति उपयोग भएको छ उती यसको दु’रुप्रयोग पनि भैरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर अहिले टिकटक निकै युवा पुस्तामा प्रचलित भएको छ । याे भिडियाे सामाजिक संजालमा निकै भा’इरल भएकाे छ ।
त्यस्तै अहिले समाजिक सञ्जाल टिकटक र फेसवुकमा एउटा भिडियो निकै भाइरल भएको छ । कुनै फार्मेसीको स्टोर रुममा एक महिला नर्सले क*ण्डम फुलाएर आफ्नो नाकमा राख्दै ओेए हेर्त ! मेरो नाक के भयो भन्दै देखाएका छन भने एक पुरुषको हातले तेस्लाई हि’र्काई रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै अहिले समाजिक सञ्जाल टिकटक र फेसवुकमा एउटा भिडियो निकै भा’इरल भएको छ । कुनै फार्मेसीको स्टोर रुममा एक महिला नर्सले क’ण्डम फुलाएर आफ्नो नाकमा राख्दै ओेए हेर्त ! मेरो नाक के भयो भन्दै देखाएका छन भने एक पुरुषको हातले तेस्लाई हि’र्काई रहेको देखिन्छ । भिडियो हेर्नुहोस
प्रकाशित मिति २७ चैत्र २०७६, बिहीबार १०:०९